ILychee, izibonelelo kunye neepropathi zesiqhamo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
ILychee sisiqhamo esivela kwimvelaphi yaseTshayina, kodwa iye yathandwa kuyo yonke indawo el mundo Ngenxa yokunambitheka kwayo kunye nokuthungwa kwayo, ixhaphake ikakhulu kumazwe akweleenjiko.
Uninzi lutyiwe ngaphakathi IKrismesiItyebile kwi-potassium, iivithamini ezintsonkothileyo C kunye no-B, kunye nokuboniswa kunyango losulelo lwamathumbu. Funda ngakumbi ngezibonelelo zeziqhamo.
1 Izibonelelo zeLychee
1.1 Ucebile kwi-vitamin C
1.2 Umthombo wezimbiwa
1.3 Umxholo wekhalori esezantsi
2 Ingasetyenziswa kwezonyango
3 Ngaba i-lychee iyakunceda ukunciphisa umzimba?
Ucebile kwi-vitamin C
ILychee ityebile ngevithamini C. Phakathi kwezibonelelo ezininzi eziyinikezelayo, iluncedo ngakumbi kulusu, emehlweni nakwinkqubo yomzimba yokuzikhusela.
Iziqhamo, ezifumaneka ngokwamaqela kwaye zinesikhumba esirhabaxa, zityebe kakhulu kwezona zimbiwa zibalulekileyo kwimpilo yethu. Ukongeza, i-pulp yayo ine-gelatinous kwaye inencasa incasa, apho sifumana khona izinto ezinje nge-iron, calcium, phosphorus kunye ne potassium.
Nangona kunjalo, ngaphandle kwentsomi yokuba inyama yeyona mithombo ilungileyo yezi minerali, imifuno kunye neziqhamo zinokulunga njengeemveliso zezilwanyana, kwaye ilitshi ngumzekelo woku.
Kulabo bajonge ukunciphisa umzimba, kucetyiswa ukusetyenziswa kwe-lychee, njengoko iziqhamo ziphantsi kweekhalori-100 g iqulethe malunga neekhalori ezingama-70.
Ke ngoko, ukuze kuphuculwe uncedo lwayo ekulahlekeni kobunzima, olona khetho lufanelekileyo kukuyisebenzisa intsha, kuthintela ukusetyenziswa kwezilondolozo kunye nezinto ezinje.
Ngohlobo lweti, i-bark yayo iyanceda kunyango lwehudo kunye nedermatitis. Kwakhona, kuqhelekile ukwenza umgubo kwimbewu yawo, nesetyenziswa njengesiqabu sentlungu kunye nokunceda ekunyangeni iingxaki zamathumbu.
Ngaba i-lychee iyakunceda ukunciphisa umzimba?
Okokuqala, akukho kutya okunye okukwenza ukuba unciphise umzimba. Nangona kunjalo, kwiYunivesithi yaseHokkaido eJapan, izazinzulu ziye zafunda iipropathi ze-lychee, ngakumbi amandla ayo okunceda ekulahlekelweni ngamafutha esiswini. Ke ngoko bafumanise ukuba ngokongeza isiciko se-lychee ekutyeni kwabo, umntu uthambekele ekulahlekelweni ngamafutha ali-15% ngaphezulu komntu ongatyi kutya kufanayo. Nangona kunjalo, kufanelekile ukuphindaphinda: akukho kutya komlingo kwaye akukho kuphulukana nobunzima ngaphandle kotshintsho olusebenzayo kwimikhwa.
Ukongeza, i-lychee sisiqhamo esinexabiso eliphangaleleyo kwaye sinokudliwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo.
Ngaphandle kweziqhamo ezitsha, i-lychee nayo idla ngokutyiwa njengendawo yokugcina ukutya (iswiti eqhelekileyo ekupheleni konyaka), kunye nokongezwa kwisaladi yeziqhamo, inika iresiphi ukubamba okukhethekileyo.
Ayisiyiyo loo nto, zininzi ezinye iindlela onokukhetha kuzo:
Iipleyiti ezahlukeneyo ezishushu
Itheyibhile yezondlo yeeLyuke (100g)
IiCarbohydrate: 16,5 g
Iprotheni: 0,83 g
Amafutha: 0,44 g
Imisonto: 1,3 g
Ifosforasi: 31 mg
Ikhalsiyam: 5 mg
Intsimbi: 0,31 mg
IPotassium: 171 mg